Haiti: Firodanan’ny sekoly iray tao Haiti · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2018 15:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Italiano, Français, English
Tsy nanakana ny vaovao hitranga ny zava-misy hoe tsy nila loza hafa i Haiti. Amin'ity indray mitoraka ity, momba ny firodanan'ny sekoly iray tao Pétionville izany, izay niteraka fahafatesan'ny ankizy maro, ary olona maro tsy voatanisa naratra. Nihazakazaka hanolotra ny fiaraha-miory sy ny fanohanany an-tambajotra ireo blaogera haitiana.
Manoratra [amin'ny teny anglisy, toy ireo blaogy rehetra voatanisa] i Haiti innovation :
”Afaka iomanana mialoha ny toe-javatra maika sasany. Manditra ny vanim-potoanan'ny tafiodrivotra, azontsika vinavinaina fa ho voakasik'ireo tafiotra i Haiti. Loza tsy afaka iomanana mialoha ny hafa, toy ny firodanan'ilay sekoly tao Pétionville halina. Ny vondrom-piarahamonin'ireo mponina moa, toy ny mahazatra, no voalohany nihetsika tamin'izany. Niezaka ny hanala haingana ireo poti-javatra araka izay vitany ny olona, saingy voahelingelin'ny tsy fahampiana fitaovana natokana ho amin'izany”.
Nohamarinin'ny blaogy Livesay Haïti fa ankizy maro no voagadra tao ambanin'ireo poti-javatra ireo ary nangataka ireo mpamaky mba ”hivavaka ho an'ireo rehetra traboina ”, toy ny nataon'i Pwoje Espwa, izay nitatitra fa nampitarazohan'ireo “tanàna tsizarizary manodidina ilay sekoly sy ny fisian'ny hantsana be, ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa fikarakarana vonjimaika ao amin'ny firenena” ireo asa famonjena voina. Avy eo, namoaka lahatsoratra an-tambajotra i Pwoje Espwa , natokana, ity farany, ho an'ny fahatsiarovana an'i Mariella Deliscan iray tamin'ireo tràboina :
”19 taona izy ary naman'i Nick Kocmich (Nico), izay niara-niasa taminay roa taona lasa izay. Ao Port-au-Prince i Nick amin'izao fotoana izao, tomponandraikitra ao amin'ny Norwich House, vondrom-piarahamonina katolika mifamatotra amin'ny diosezin'i Norwich, ao Connecticut. Tao anatin'ny fianakavian'ny Norwich House i Mariella ary ho halahelovana be mihitsy. Atolotray ny vavakay ho an'ny fianakaviany, ny namany ary ireo rehetra very sakaiza tao anatin'ity loza tampoka mahatsiravina ity, izay fantatray amin'izao fotoana izao fa nahafaty olona 82. ”
Nanaiky i The Blesh family, blaogera mipetraka eo ambanin'ilay havoana nisy ilay sekoly, fa ”nahatsiravina be” ilay toe-javatra, raha toa kosa mitatitra ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny namany, izay ”teny akaiky teny ary afaka nijery ny zava-niseho” ilay blaogera RHFH Rescue Center :
Nilaza izy fa nisy kilasy iray nisy ankizy 47, izay 45 no maty. Nahita faty maro notsoahana teo amin'ilay trano fianarana izy. Nataon'izy ireo tao aorian'ny fiara kely iray ary nentiny toy izany ireo faty. Naheno tamin'ny onjam-peo izahay androany fa araka ny tombana dia 80 no maty, teo amin'ny 500 teo no ankizy tao amin'ilay sekoly.
Tetsy ankilany, nampalahelo an'i The Haitian blogger ny zavamisy hoe nanome fanohanana ara-bola ho amin'ny ”fitoniana” (politika) fa tsy ho amin'ny foto-drafitrasa ny Firenena Mikambana:
”Teraka tao Pétionville tao Haiti aho. Tanàna tao amin'ny ambanivohitry ny renivohitra, Port-au-Prince izany. Nirodana omaly maraina ireo rihana telo tao amin'ny tranobe tao amin'ny sekoly nantsoina hoe ” La promesse” tao Pétionville. Tena montsana mihitsy ilay tranobe. Nianjera tamin'ny ankizy teo amin'ny 500 ka hatramin'ny 700 teo ny vatosokay, tany amin'ny sekolin-jaza madinika ka hatrany amin'ny lisea, ny zoma andro nitrangan'ny firodanan'ny sekoly.
Ankizy 50 no maty raha kely indrindra. Amin'izao fotoana izao indrindra, mangady amin'ny tànany sy miasa mandritra ny alina ireo Haitiana mba hanalàna ireo faty voatototra ao ambanin'ireo poti-javatra.
Tamin'ny nisian'ny ONU tao Haiti, nangataka traktera sy bildozera, fotodrafitrasa maromaro kokoa tao Haiti, fa tsy fiara mifono vy sy basy ny filoha haitiana René Préval. Ankehitriny, miisa 9000 ireo tafika misatroka manga avy ao amin'ny ONU no ao Haiti. Tetibola voafidy sy nekena ho an'ny misiona fampandriana tany avy amin'ny Firenena Mikambana MINUSTAH) ho an'ny vanim-potoanan'ny voalohan'ny volana Jolay 2008 ka hatramin'ny 31 Jona 2009: 601,58 tapitrisa dolara US (jereo ilay tatitra ”Zava-misy sy Isa” an'ny MINUSTAH ao Haiti). 50,13 tapitrisa dolara US isam-bolana izany, izany hoe, 1,64 tapitrisa dolara isanandro. Omaly, raha mba nanana bildaozera betsabetsaka kokoa i Haiti, maro ny ankizy tokony ho voavonjy.